Nanao fihetsiketsehana ny mponina Mahitsy: tsy tana ny ain’i Mompera Nicolas Soanavela | NewsMada
Na teo aza ny fiala-nenina tamin’ny fitsaboana azy, tsy tana ny ain’ny Mompera Nicolas Soanavela, ilay voatifitry nandritra ny fanafihan-jiolahy, teny Mahitsy ny asabotsy 9 febroary teo. Nanao fihetsiketsehana nanoloana ny borigadin’ny zandary, omaly, ny mponin’i Mahitsy, nitaky ny hamoahana ireo jiolahy.
Namoy ny ainy tao amin’ny Clinique Ankadifotsy, omaly maraina teo amin’ny faha-38 taonany ny Mompera Ratodisoa Nicolas, teraka ny 14 novambra 1981 (Mompera Nicolas Soanavela no ahafantaran’ny olona azy ao Mahitsy) izay notifirin’ny jiolahy nirongo fitaovam-piadiana nandritra ny fanafihana tranombarotra an’ny metisy sinoa iray eny Mahitsy, ny asabotsy lasa teo. Nandeha moto hamonjy fodiana izy ary nandalo teo amin’ilay toerana nitrangan’ny fanafihana ka norarafan’ireo jiolahy ny tifitra ka nianjera avy hatrany. Avy nanatitra Sakramentan’ny marary tamin’io fotoana io kinanjo nifanehitra tamin’ireo jiolahy mpanafika.
Nentin-katezerana ny mponina tao Mahitsy ka nanao fihetsiketsehana manoloana ny borigadin’ny zandary, omaly nitaky ny hamoahana ireo jiolahy tompon’antoka tamin’ity fanafihana ity, ny asabotsy lasa teo. Nangataka mba hijery raha tena voasambotra marina ireo jiolahy. Nanaparitaka ireo mpanao fihetsiketsehana tamin’ny alalan’ny vovoka lakrimozena ny zandary. Nambaran’ny kaomandin’ny zandarimariam-pirenena, ny Jly Andrianjanaka Njatoarisoa fa tsy handefitra amin’ireo zandary mandika lalàna izy ary tsy natao ho fialokalofan’ny mpanao ratsy ny eo anivon’ny zandarimariam-pirenena. “Momba ity raharaha Mahitsy ity, mitovitovy amin’ilay zandary voarohirohy ny endrik’ilay jiolahy hita tao anaty camera de surveillance, saingy mbola ao anatin’ny fanadihadiana izahay amin’izao fotoana izao. Raha mitombina fa izy io dia tsy maintsy ampiharina ny lalàna”, hoy izy.
Mamy hoditra tamin’ny vahoaka, ny Mompera Nicolas…
Tsy vita tao amin’ny hopitaly ao Anosiala Ambohidratrimo ny fandidiana azy ka nentina tao amin’ny hopitaly Clinique Ankadifotsy, saingy namoy ny ainy ihany izy. Raha ny fampitam-baovao voaray, nandrasana tao amin’ny “Ekar Notre Dame de l’Assomption” Mahitsy ny nofo mangatsiakan’ity relijiozy ity. Hoentina handrasana anio ao amin’ny “Salle d’oeuvre” Andohalo mialoha ny hametrahana azy eny amin’ny fasan’ny misiona eny Ambohipo rahampitso alahady. Hisy ny Eokaristia masina ho fisaorana an’Andriamanitra hatao amin’ny Katedraly Andohalo rahampitso amin’ny 2 ora tolakandro. Mompera mamy hoditra tamin’ny vahoakan’i Mahitsy ny Mompera Nicolas ka nahatonga ireo olona nalahelo ary naneho ny hatezerany nitaky ny hamoahana ireo jiolahy nitifitra azy. Ny 21 aogositra 2016 izy no nandray ny fanamasinana ho mpisorona ary efa maro ny toerana niasany, isan’izany ny tao Ankazotoho, Alarobia Antanamalaza, Soanavela izay misy ny toeram-pamokarana ao Mahitsy, zary lasa anarana fiantsoan’ny olona ny hoe Mompera Nicolas Soanavela.
Tsiahivina fa olona roa izany no namoy ny ainy nandritra ity fanafihan-jiolahy nitranga teny Mahitsy tamin’ny heriny androany ity. Nalevina omaly ihany koa ilay raim-pianakaviana metisy sinoa maty voatifitry ny jiolahy tamin’io fotoana io.